သျောလှဲချြောရှေ့နေ Hannover horak ရှေ့နေများ / Fachanwälte: ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေ, အာမခံဥပဒေ, စိတ်ရှည်ထောက်ခံအားပေးမှု, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဥပဒ
horak ။ ရှေ့နေများ - သျောလှဲချြော
သျောလှဲချြော, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေ, အာမခံဥပဒေနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေများအတွက်ရှေ့နေ
ကျနော်တို့အကြံပေးများနှင့်နှစ်ဦးစလုံးလူနာများနှင့်ဆရာဝန်များ, ဆေးရုံများနှင့်ဆက်စပ်အာမခံကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားသည်ဤပဋိပက္ခရှောင်ရှား, ဒါပေမယ့်အားလုံးနှစ်ဖက်နှင့်အတူအပြည့်အဝကနေကျွန်တော်တို့ကိုငါသိ၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်ရည်မှန်းချက်-oriented ချဉ်းကပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်အမှုဖြေရှင်းရန်နိုငျသောကွောငျ့ဤသူသည်သင်တို့အဘို့နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သျောလှဲချြော / ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခွင့်အရေးများ: စသည်တို့ကိုဆေးမှားယွင်းမှုများအတွက်ကုသမှုမှားယွင်းမှုများအတွက်ပညာရေးချို့တဲ့သည့်အတွက်သျောလှဲချြောအကြောင်း
သက်သေအထောက်အထားများနှင့်သက်သေအထောက်အထား: အထောက်အထားသို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုများရှာဖွေတွေ့ရှိမှု (ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်း, လူနာရဲ့ဖိုင်စစ်ဆေးခြင်း) နဲ့ဆက်သွယ်မှုအတွက်
ပြစ်မှုဆိုင်ရာသျောလှဲချြော: (ထိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုနှင့် ဆက်စပ်. အတွက်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ၏ပြစ်မှုဆိုင်ရာတာဝန်)
ဂုဏ်ထူးဆောင်ဥပဒေ: အဆိုပါဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Practitioner ၏တောင်းဆိုမှုများအခကြေးငွေများကာကွယ်ရေးနှင့်အခြားကျန်းမာရေးအဆောက်အဦ (ဆေးရုံများ, အထူးဆေးရုံများ, ကုသ, အခြားရွေးချယ်စရာဆေးဝါးပုံစံများ, etc) ခုနှစ်တွင်
အာမခံဥပဒေ: ကနျြးမာရေးအာမခံ (ပုဂ္ဂလိက / ဥပဒေရေးရာ / အာမခံ) / ပင်စင်
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဥပဒဆေးဘက်ဆိုင်ရာဥပဒ၏အထူးပြုလယ်ပြင်သည်နှင့်အထူးသဖြင့်လူနာတွေအတွက်, ပို. ပို. အရေးကြီးသောဖြစ်လာနေသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုကိုအောက်မှာစောင့်ရှောက်မှု, မိမိတာဝန်ချိုးဖောက်၏အဖြစ်အပျက်၌သူ၏လူနာဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့ဆရာဝန်၏အရပ်ဘက်တာဝန်မှအဓိကအားရည်ညွှန်းသည်။ ဆရာဝန် culpably ကုသမှုအမှားတစ်ခုအတွက်ကတိပြုတော်မူလျှင်, စိတ်ရှည်ဖို့ထိုက်ဖြစ်ပါသည်.
ကုသမှုမပြုမီ, ဆရာဝန်ဆရာဝန်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယကြွေးတင်နေသည်ဟုရာကနေမှသူ၏လူနာတစ်ဦးကိုကုသစာချုပ်နှင့်အတူနိယာမပိတ်။ လူနာများ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ, ဆရာဝန်မဆိုကုသမှုယူမည်မဟုတ်ပါ။ အဘယ်သူမျှမသဘောတူညီခကျြရှိလြှငျ, ဆရာဝန်တစ်ဦးပြစ်မှုဆိုင်ရာချေမှုန်းရေး commits နှင့်လူထုအခြေပြုတရားမနစ်နာမှုများတာဝန်ယူမှုကိုမှန်ကန်စေသည်။ ထို့ကြောင့်ဆရာဝန်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအတွက်စိတ်ရှည်ဖို့ထိုက်သည်။
ဒါဟာကုသမှုမှားယွင်းမှုများကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်ချဉ်းဖို့အမြဲလွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု၏အဖုံးအပြင်, ကိစ္စတွင်အတွေ့အကြုံနှင့်ရှေ့နေများ၏ Know-ဘယ်လိုလိုအပ်သည်။ သောကြောင့်ဆေးပညာပစ္စုပ္ပန်ဥပဒေပြဌာန်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအတွင်းသျောလှဲချြောနှင့်အမှုဥပဒပါလျှင်တစ်ဦးဥပဒေရေးရာနှင့်မဆေးဘက်ဆိုင်ရာမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးအဖြေရှာတဲ့အမှားအဘို့သက်သေများ၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး, ပညာရေးသို့မဟုတ်ကုသမှုမအောင်မြင်ခြင်းအမှားအများဆုံးကိစ္စများတွင်အမည်ရသားကောင်များတည်ရှိသည်, ဒါကြောင့်အမှု၏ဥပဒေရေးရာအကဲဖြတ်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ နှင့်ရှေ့နေပလ္လင်တစ်ခုသာအထူးပြုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်လျော်ကြေးတောင်းဆိုမှုများ၏သငျ့လျြောသောဘက်တော်သားစေနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ e-mail လိပ်စာ (လိုအပ်)
တစ်တာဝန်ခံမှာ - - တစ်ဦးကလူနာထံမှဆေးရုံကုသစေခြင်းငှါနောက်ထပ်မရှိဘဲအားလုံးကုသမှုမှတ်တမ်းများပြန်တောင်း။ လူနာဤသတင်းအချက်အလက်အတွက်တရားဝင်အကျိုးစီးပွားဆေးရုံရှိပါတယ်လျှင်သို့သော်သူ၏ကုသမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဆရာဝန်များများ၏အမည်များနှင့်လိပ်စာများကိုသာအကြောင်းကြားရပါမည်။ ဒါက 26 ရှိပါတယ်။ မြို့ပြတိုင်း၏အဆင့်မြင့်ဒေသဆိုင်ရာတရားရုံး Hamm 14.07.2017 ကနေခရိုင်တရားရုံး Bochum (Az ။ 27.07.20166အို /9LG က Bochum) ၏ပထမဦးဆုံးဥပမာအားဖြင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုအတည်ပြု, 16 အပေါ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြဌာန်းချက်ကျန်းမာရေးအာမခံ၏မရှိခြင်းမှာလူနာ§§ 10 ff BPflV နှင့်အညီကုန်ကျစရိတ်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ခံထိုက်ပေ၏ဖြစ်နေဆဲ
ဆေးရုံအော်ပရေတာနှင့် (အသေးစားလူနာရဲ့မိခင်၏ဤအမှု၌) လူနာရှိသည်, ကြောင်းဆေးရုံနေထိုင်၏ကုန်ကျစရိတ်ယူဆအပြင်းအထန်တောင်းဆိုနှင့်ထဲကအမှားအတိုင်းဤပေါ်ပေါက်, ထို့နောက် (ထိုဆေးရုံအခွင့်အာဏာအကြားနှင့်လူနာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာမခံသောဘုံအယူအဆ ဤနေရာတွင်ကုသမှုစာချုပ်) ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဟာအသေးစားလူနာများ၏မိခင်ပိတ်လိုက်တယ်။ ဆေးရုံတင်သင်္ဘောနှင့်လူနာ (လူနာများ၏ဤအမှု၌မိဘ) ဆေးရုံတင်သင်္ဘောများ၏ကုသမှုကိုစာချုပ်အကြောင်းတရားများလူနာများ၏ယေဘုယျဆေးရုံန်ဆောင်မှုများအတွက်§§ 10 ff BPflV လျော်ကြေးငွေ (နှင့်အညီဆုံးဖြတ်ထားခံရဖို့ပိတ်လိုက်တို့အကြား၏ညှိနှိုင်းမှု၏အခြေခံ၏မရှိခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်း ) ကလူနာများ၏မိခင်ထံမှတောင်းဆိုနိုင်သည်: ကဒီမှာ။ BGH, 28 ၏တရားသဖြင့်စီရင်။ ဧပြီလ 2005 - III ကို ZR 351 / 04 - OLG Koblen LG က Koblenz ။
တစ်ဆေးပညာအအဓိပ္ပါယ်ရှိသောနဲ့ Indexer ကုထုံးများအတွက်ရရှိနိုင်အများအပြားညီမျှကုသမှုရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်လျှင်လူနာရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်များထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတဲ့အခြားရွေးချယ်စရာကုသမှုထုတ်ဖော်လိုအပ်သည်။
စစ်မှန်သောသည်အယူခံတရားရုံးနှစ်ခုကုသမှုအခြားနည်းလမ်း, အချိန်တွင်သစ်တစ်ခုမြေပြင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများခဲ့သည့်တဦးတည်းရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်ဟူသောအချက်ကိုရှင်းလင်းဖို့အတည်ပြုသည့်တရားခံတစ်ဦးတာဝန်ရှိပါတယ်။ - VI ကို ZR 102 / 17 - VersR 22, 106 153 မေလ 157 ထံက၎င်း, အထက်လွှတ်တော်အဆိုပါဆရာဝန် (အထက်လွှတ်တော်တရားစီရင်ပိုင် BGHZ 11, 1982, 171, 80, 1982, 771 ၏အဓိကတာဝန်ဖြစ်သော်လည်း Behandlungsmetho-de ၏ရွေးချယ်မှုအသိအမှတ်ပြု၏တရားရုံး။ ။ 772; 24 အဘယ်သူမျှမ-vember 1987 ထံမှ - VI ကို ZR 65 / 87 - VersR 1988, 190, 191 နှင့် 15 မတ်လ 2005 - VI ကို ZR 313 / 03 - VersR 2005, 836 ;. OLG Zweibrücken, OLGR 2001, 79, 81 နှင့်အတူ 19 ဒီဇင်ဘာလ 2000 ၏ Panel ကို၏ NA-ဆုံးဖြတ်ချက် - VI ကို ZR 171 / 00 - ;. OLG Karlsruhe, MedR 2003, 229, 230) ။
မျိုးစုံတန်းတူကုသမှုရွေးချယ်စရာလူနာသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအန္တရာယ်များနှင့်အခွင့်အလမ်းများကို (အထက်လွှတ်တော်တရားစီရင်ပိုင် BGHZ 102, 17 ၏ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးကွဲများလိမ့်မည်ဟုရရှိနိုင်မယ့်ဆေးပညာအအဓိပ္ပါယ်ရှိသောနဲ့ Indexer ကုထုံးများအတွက်ရရှိနိုင်သည့်အခါသို့သော်လူနာရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်များထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတဲ့အခြားရွေးချယ်စရာကုသမှုထုတ်ဖော်လိုအပ်ပါတယ် ။ , 22, 106, 153, 157; 14 စက်တင်ဘာလ 2004 ထံမှ - VI ကို ZR 186 / 03 - VersR 2005, 227; 15 မတ်လ 2005 ထံမှ - VI ကို ZR 313 / 03 - Ibid ;. ကြောင် Meier, သျောလှဲချြော, 2002, p 331,f။ , ..... MünchKommBGB / Wagner,4RN 823,f§, 707 ed; ။ Staudinger / Hager, BGB, 13 1999, RN §  processing ငါနောက်ထပ်ကိုးကား 92) ။
134 ZPO သို့မဟုတ်။ 142 ZPO §အညီပါတီများအားဖြင့်§ 1 ABS နှင့်အညီအဆိုပါတတိယပါတီမူရင်းစာရွက်စာတမ်းများတင်သွင်းတရားရုံးမှတ်တမ်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ဖိုင်ကိုဖို့ဒါမှမဟုတ်ကော်ပီ၏ပြဿနာမှဝင်ရောက်ဖို့တစ်ဦးကညာဘက်§ 299 ZPO မှတိုက်ရိုက်နောက်သို့မလိုက်ပါဘူး။ ချက်ချင်းတရားရုံးသည်နှင့်အညီဖြစ်သောစာရွက်စာတမ်းများပါ။ 142 ZPO တတိယပါတီများထံမှရရှိသောခံရ§, အဲဒီမှာမျိုးပွားရန်ညာဘက်ပေမယ်§§ 131, 133 ZPO နှင့်§ 299 ZPO ၏အလားတူ application ကို၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များအနေဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးကြားသိစေခြင်းငှါအခြေခံမူစောငျ့ရှောကျဖို့အရသိရသည်။ အနုပညာ။ 103 မသန်စွမ်း။ 1 GG ။
§ 299 ZPO အတိအလင်းအဆိုပါပါတီများမဆုံးမစကားကိုတင်သွင်းစာရွက်စာတမ်းများမပေးပို့ဘို့ပေးပါသည်။ ဖိုင်တွေကိုလိုအပ်သောနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချလက်ခံရရှိသူမပါလျှင်ဒါပေမယ့် dispatch, သင့်လျော်သောထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနောက်ရာအရပျယူနိုငျသညျ။ ကာကွယ်ရေးများ၏အခွင့်အရေးကိုအဆုံးအဖြတ်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။
အလားတူထိုပါတီများကတင်ပြပါသို့မဟုတ်တရားရုံးနှင့်ချုပ်နှောင်ထားစာချုပ်များအကြားလူတစ်ဦးထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြသည့်အခါ 142 ZPO တတိယပါတီလက်မှတ်များနှင့်စာရွက်စာတမ်းများ§အညီသက်ဆိုင်သည့်အေးဂျင့်မှဖိုင်များကိုပေးပို့ရန်သဘောတူ။ တရားရုံးပို့ပေးရန်ငြင်းဆန်ခြင်းမပြုမီ, ကသူတို့တစ်တွေနှစ်ဖက်စလုံး၏ကိုယ်စားလှယ်များဖို့စာရွက်စာတမ်းများမပေးပို့ဖို့သဘောတူလျှင်တတိယပါတီမှာမေတ္တာရပ်ခံခံရဖို့ပထမဦးဆုံးရှိပါတယ်။
ရှေ့နေ ဆရာဝန် သျောလှဲချြော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုပြောဆိုချက်ကို သျောလှဲချြောဝတ်စုံ သျောလှဲချြောမှုလုပ်ငန်းစဉ် သျောလှဲချြော Arzthonorar ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဥပဒ Arztregress ဆရာဝန်ပြစ်မှုဆိုင်ရာ သစ္စာဉာဏ်အလင်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ရပ်များ၏သစ္စာဉာဏ်အလင်း ထုတ်ဖော်တာဝန်ဝတ္တရား geek နည်းလမ်း ကုသမှုမအောင်မြင်ခြင်း Behandlungsvertrag BGH ခှဲစိတျကုသရေးဆရာဝနျ ကန့်ကွက်ချက် Erstoperation FolgeoperationPatientenrechte Goa တာဝန် ဆေးရုံ အသေသတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြမ်းဖက်မှု Laborarzt တောင်းဆိုမှုများဌာန လူနာ Patientenanwaltschaft လူနာသတင်းအချက်အလက် လူနာများ၏အခွင့်အရေးများ ရှေ့နေ Regressabteilung Regressfall အန္တရာယ်ထုတ်ဖော် ကျွမ်းကျင်သူအမြင် လျော်ကြေးငွေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု လျော်ကြေးပြောဆိုချက်ကို ကန့်သတ် အာမခံ နှောငျ့နှေး default အနေနဲ့တရားသဖြင့်စီရင် overacceleration
12a ApoG §: အသိပညာဆေးရောင်းသူအခမဲ့ဦးဆောင်လမ်းပြနှင့် uncompensated အားထုတ်မှုများအတွက်ဘဏ္ဍာရေးလျော်ကြေးငွေလက်ခံရရှိသည် "အိမ်ဆေးဆိုင်" သင့်ပါတယ်
ခွဲစိတ်ကုသနေ့စွဲ၏ဖျက်သိမ်းခြင်း၏အမှု၌ unterzeichnetem optional ကိုဝန်ဆောင်မှုစာချုပ်ဖျက်သိမ်းခြင်းအခကြေးငွေတားမြစ်သည်တောင်မှနှင့်အတူ
တစ်ဦးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း fatefully, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှားကုသမှုတာဝန်ယူမှုကိုတစ်ဦးကလေးမွေးဖွား၏အခါသမယအပေါ်ကျန်းမာရေးကိုဆုံးရှုံးနစ်နာစေ
823 ABS 1 BGB §
အောက်ပိုင်း Saxony ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး
Horak ရှေ့နေ Hannover
မူပိုင်ခွင့်© 2018 Bei horak ။ ရှေ့နေများ - သျောလှဲချြော, အားဖြင့်လှူဒါန်းခဲ့ WordPress ကို။ theme: ဗွန်အရှိန်မြှင့် ThemeGrill.